Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha kiish-biyo-geliyaha biyuhu - Shiinaha Warshad bacda weelka biyuhu ka galaan
Boorsada bannaanka ee bacda biyuhu ku jiraan
Bacda duffel-biyood ee biyuhu ku habboon yihiin safarka dibadda. Waxyaabaha aan biyuhu karin ee PVC waxay ku habboon yihiin muuqaallo kala duwan, sida dabaasha, jir dhiska, tennis, ama safar gaaban. Boorsadan duffel ayaa kuu noqon doonta kaaliyahaaga wanaagsan. Boorso shandadaysan oo fashionistas jecel isboortiga ama safarka waa inay lahaadaan. Waxay leedahay qurux iyo wax ku ool labadaba.
Bacda Duffel Safarka Dibedda ah
Boorso safar dibadeed oo badan oo shaqeynaya Wax tayo sare leh oo PVC ah, awood aad u weyn oo ah 65 litir. Ku habboon xaalado kala duwan. Haddii aad ku safreyso dibadda, tababar ku qaadashada garoon kubbadda laliska, ku dabaalaneyso barkadda dabaasha, ama aad ku shaqeyneyso qolka jimicsiga. Boorsadani waxay kuu noqon doontaa caawiyahaaga wanaagsan.
Awood-siinta kartida ballaaran ee bacda safarka
Saaxiibkaaga safarka ah, oo casri ah oo fudud, iska dhaqaaq. Tayada tayada sare leh ee maadada TPU-da, xirashada u adkaysata iyo biyuhu. 55L Meel weyn oo lagu keydiyo, ha ahaato socdaal, jir dhis, ama tababar aad bey u habboon tahay. Way fududahay in la qaado oo si fudud loo isticmaalo.
Tababbarka Jirdhiska Safarka Boorsada Gaarka ah
Bacda duffel-biyood leh oo leh 500D-PVC walxo iyo 70L awood ballaaran. Waxaad u isticmaali kartaa safarka, jir dhiska, tababarka, dabaasha iyo munaasabadaha kale. Ku habboonaanteeda iyo iska caabbinta biyaha ayaa kuu keeni doonta lama filaan weyn.